Madaxda Soomaaliya iyo Jabuuti oo markale hoosta ka xariiqay xiriirka gaarka ah ee labada dal ay wadaagan - Halbeeg News
Madaxda Soomaaliya iyo Jabuuti oo markale hoosta ka xariiqay xiriirka gaarka ah ee labada dal ay wadaagan
MUQDISHO (HALBEEG)- Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, ayaa maanta wadahadallo ku yeeshay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, kaddib booqasho laba maali ah oo Madaxweyne Geelle uga bilaabatay Soomaaliya.
Labada hogaamiye ayaa wadahadalladooda diiradda ku saaray danaha ay labada dal wadaagaan, xoojinta iskaashiga iyo wadashaqaynta labada dhinac iyo dardargelinta hawlgallada ka dhanka ah kooxaha nabad-diidka ah ee u taagan daadinta dhiigga shacabka iyo curyaaminta dowladnimada Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo ayaa dowladda Jabuuti uga mahadceliyay kaalinta ay ciidamada hiil-walaal ka qaataan nabadgelyada dalka iyo dib u soo kabashada Soomaaliya, taasi oo ka tarjumaysa sida ay dowladda Jabuuti daacadda uga tahay garabsiinta walaalahooda Soomaaliyeed.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in maanta ay tahay maalin taariikhi ah oo ka tarjumaysa xiriirka labada dal iyo labada dad ee walaalaha ah “Waa inaan xoojinno iskaashiga dhanka dhaqaalaha iyo wax wada qabsiga,” ayuu sheegay madaxweyne Farmaajo. Waxaa uu intaa ku daray in arrinta ugu muhiimsan ay tahay iskaashiga arrimaha amniga iyo la dagaallanka qolooyinkan argagaxisada ah “Waxaan aad iyo aad runtii kaaga mahadcelinayaa hoggaankaaga oo aad qayb uga tahay la dagaallanka argagaxisada,” ayuu yiri Farmaajo.
Ismaaciil Cumar Geelle ayaa dhankiisa sheegay inuu farriin walaaltinimo, hambalyo iyo dhiirrigelin uga sido shacabka reer Jabuuti, isaga oo hoosta ka xarriiqay in labada waddan ay wadaagaan xiriir walaaltinimo oo soojireen ah, dowladdiisana ay ka go’an tahay inay Soomaaliya ku taageerto sidii ay ula soo noqon lahayd maqaamkii iyo sharaftii ay ku lahayd caalamka. Madaxweyne Gelle ayaa sheegay in dadweynaha [labada dhinac] ay jecelyihiin in iskaashiga la sii kordhinno, in labada dal wadaagaan dhib iyo dheefba, oo leysku duubnaanno “Annaguna waxaan fulinaynaa waxa uu dadweyneheennu leeyahay,” ayuu sheegay Geelle, oo intaa raaciyay “Wehel baad noo tihiin, annaguna wehel baan idiin nahay.”
Ninka loo heysto weerarkii shalay lagu laayay muslimiinta ee Niyuusiilaan oo maanta maxkamad la soo taagay
Fanaaniinta aadka loo jecelyahay ee Samatar iyo Cigaal oo tobonnaan sano ka dib maanta Muqdisho yimid